घोडामा के छ हजुर ? - मनोरञ्जन - नेपाल
गुगलमा म्युजको शाब्दिक अर्थ खोज्दा हिन्दीमा सरस्वती देखाउँछ । सायद गुगलले नेपाली वर्ण चिन्दैन । खैर, म्युज अर्थात् प्रेरणाको स्रोत । ग्रीक तथा रोमन मिथक कथाअनुसार जिउजबाट जन्मेका ९ देवीमध्येकी एक, जो कला र विज्ञानकी देवी थिइन् । हिन्दु मिथकअनुसार कला र विद्याकी देवी सरस्वती ।
कलाकारको म्युज बन्न नचाहने को होला ? तर कलाकारले कहाँ, कति बेला, कसलाई म्युज बनाउँछ ? त्यो भन्न सकिन्न । भारतको कोलकाताबाट आएका सार्फुदिन अहमद हाल्डरले घोडालाई आफ्नो म्युज बनाएका छन् । उनले २९ शीर्षकमा घोडाका चित्र क्यानभासमा उतारेका छन् । कुनै घोडा सेतो रङको छ, कुनैमा रातो पृष्ठभूमिमा कुदिरहेका घोडा ।
महाभारतमा अर्जुनको सारथि भई कृष्णले चलाएको घोडा आकर्षक छ । कलाकार सार्फुदिनलाई घोडाको गति खुबै मन पर्ने रहेछ । त्यसैले उनले सबै क्यानभासमा भिन्नभिन्न अवस्थामा घोडाको गति देखाएका छन् । नेपाल आर्ट काउन्सिलमा १ भदौबाट सुरु भएको प्रदर्शनी चार दिनसम्म चलेको थियो ।